Abhala NgoYesu | Fundisa Abantwana Bakho
Uyawazi la madoda asemfanekisweni?— NguMateyu, uMarko, uLuka, uYohane, uPetros, uYakobi, uYude noPawulos. Ayephila kunye noYesu yaye abhala ngaye. Makhe sifunde ngawo.
Yintoni oyaziyo ngala madoda?
Amathathu kuwo yayingabapostile ababeshumayela noYesu. Uyazi ukuba ngawaphi?— NguMateyu, uYohane noPetros. Umpostile uMateyu noYohane babemazi kakuhle uYesu, yaye bobabini babhala iincwadi ngo bomi bukaYesu. Umpostile uYohane wabhala incwadi ebizwa ngokuba siSityhilelo neeleta ezintathu, eyokuQala KaYohane, eyeSibini kaYohane neyeSithathu kaYohane. Umpostile uPetros wabhala iileta ezimbini eziseBhayibhileni. EyokuQala kaPetros neyeSibini kaPetros. Kwileta yakhe yesibini, uPetros ubalisa ngesihlandlo saxa uYehova wathetha ngoYesu esezulwini, esithi: ‘Lo ngunyana wam. Ndiyamthanda yaye ndiyazidla ngaye.’
Namanye amadoda asemfanekisweni abhala iincwadi ezisifundisa ngoYesu. Enye yawo nguMarko. Mhlawumbi wayekho yaye ebona yonke into eyenzekayo xa uYesu wayebanjwa ngamajoni. Enye nguLuka. Yena wayengugqirha yaye mhlawumbi waba ngumKristu emva kokufa kukaYesu.
Abanye ababhali beBhayibhile ababini abakulo mfanekiso ngabaninawa bakaYesu ababini. Uyawazi amagama abo?— NguYakobi noYude. Ekuqaleni babengakholelwa kuYesu. Babecinga ukuba umkelwa ziingqondo. Kodwa emva kwexesha bakholelwa kuye baza baba ngamaKristu.
Umbhali weBhayibhile wokugqibela ombona kulo mfanekiso nguPawulos. Ngaphambi kokuba abe ngumKristu, igama lakhe yayinguSawule. Wayewacaphukela amaKristu yaye ewakhohlakalele. Uyazi ukuba yintoni eyamenza waba ngumKristu?— Ngenye imini esendleleni weva ilizwi liphuma ezulwini. Yayililizwi likaYesu! Wathi kuPawulos: ‘Kutheni ubakhohlakalele kangaka abantu abakholelwa kum?’ Emva koko uPawulos waba ngumKristu. UPawulos wabhala iincwadi eziyi-14 zeBhayibhile, eyabaseRoma ukuya kutsho kumaHebhere.
Ngaba sele uqalile ukufunda iincwadi zeBhayibhile ezithetha ngoYesu okanye ngaba kukho umntu okufundela zona?— Eyona nto intle onokuyenza ngoku kukufunda ngoYesu. Uyafuna andithi?—
2 Petros 1:16-18
UMarko 3:21; 14:51
Ngabaphi abapostile bakaYesu ababhala ngaye?
Ngoobani ababhali beBhayibhile ababini ababengabaninawa bakaYesu?
Kwenzeka ntoni ukuze uPawulos abe ngumKristu?